Marka ka shaqeeya Microsoft Windows, inta jeer ayaad arkay fariin sheegaysa in faylka gaar ah aad isku dayayaan in ay tirtirto waa hore u isticmaalo, iyo in barnaamijka isticmaalaya file waa in la joojiyay ka hor intii Windows aad u ogolaanaya in ay faylka kaxeeyo PC ?
Dhibsado !! War sow ma aha?
Waa hagaag, ma mar dambe.
Halkan waxa ku jira saddex siyaabood midkood aad u isticmaali karto in uu ku qasbo tirtirto file a in uu yahay in la isticmaalo iyo Windows ma ogola in aad sida caadiga ah ka saar.
Force takhalusid File ah ee isticmaal in Windows
Habkani inta badan jeer u shaqeeyo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa, qasbi joojiyo barnaamijka isticmaalaya faylka. Haddii loo maleeyo in aad horey u ogaato barnaamijka waa la isticmaalayo file ah in aad rabto in aad ka saarto, tani waa sida aad tirtirto faylka:
Fiiro gaar ah: Windows 7 waa halkan loo isticmaalo sida PC tixraac.
Ciidamada la joojinayo habka a xiray barnaamijka oo dhan oo laga yaabaa in aad lumiso wixii xog ah badbaadina in kasta oo file kale ee ku tiirsan tahay barnaamijka waxaa laga yaabaa. Waxaa lagu talinayaa in la badbaadiyo horumarka shaqada oo dhan ka hor inta Socota.
1. aad screen desktop, xaq-riix taskbar ah.
2. Laga menu macno u muuqata, riix Start Manager Task.
3. In sanduuqa Manager Task, haddii aan hore waxaa, tag Ka shaqeyta tab.
4. Ka liiska soo bandhigay ee geedi socodka socda, xaq-riix mid ka mid ah in aad ogaato waa la isticmaalayo file ah in aad rabto in aad tirtirto.
5. Laga soo bilaabo menu xaaladda, guji End Hab- ama Hab-End Tree . ( geed-socodka End waxaa halkan riixi.)
6. box xaqiijinta in booda ah, riix habka End geed button ka hooseysa.
7. Marka nidaamka ayaa si xoog ah la joojiyo, si fudud faylka idin tagsiin karo sida ay mar dambe ma waxaa loo isticmaalaa ilaa habka bilaabo socda mar kale.
Fiiro gaar ah: Mararka qaar waxaad u baahan tahay in si degdeg ah in la tirtiro file ciidamada ka dib markii la joojinayo habka. Tani waa sababta oo ah hababka qaar ka mid ah waa madax adag oo xataa haddii aad si xoog ah iyaga joojiso, ay si toos ah u bilaabi dhowr ilbiriqsi ka dib.
Laga soo bilaabo Command degdeg ah
Habkani waxaad u baahan tahay in la furo Command degdeg ah aad Windows PC. Wixii files ay isticmaalaan hab dhaqanka qaar ka mid ah (geeddi socodka ah in la bilaabi karaa oo la xiray by heer - account user aan maamulaha), furitaanka degdeg ah Command on account ah user heerka filan lahaa. Si kastaba ha ahaatee haddii faylka loo isticmaalo by habka nidaamka wax, waa in ay degdeg Command kacsantahay la initialized. An degdeg ah Command kacsantahay waa suuqa kala amarka ah in uu leeyahay dhamaan xuquuqda maamulka iyo dhamaan hawlaha maamul lagu samayn karo via amarrada in ay interface.
Tani waa waxa aad u baahan tahay in la sameeyo:
Fiiro gaar ah: A Windows 7 PC waxaa loo isticmaalaa in tusaale ahaan this.
1. aad Windows PC, hel gal ay ku jiraan faylka in isticmaalka in aad rabto in aad tirtirto. (Ha gelin gal ah.)
2. Shift + xaq-guji galka.
3. Laga bilaabo menu sare macno u muuqata, guji suuqa kala amarka Open halkan ama riix W muhiim ah oo ku saabsan keyboard ah.
Fiiro gaar ah: Habkani ma ogola in aad si furan yahay suuqa kala amarka kacsantahay.
Fiiro gaar ah: Si aad u billowdo degdeg ah Command kacsantahay, guji badhanka Start, nooca Lauch sanduuqa raadinta hoose ee menu Start ah, xaq-riix Lauch ka barnaamijyada soo jeediyay 'liiska, guji Run sida maamulka ka menu xaaladda, iyo User Account Control sanduuqa xaqiijin, nooca sirta ah ee koontada admin (ama guji Haa haddii Windows ma idin ​​waydiisan maayo password) si aad bixiso ogolaashahaaga in ay sii wadaan. Ka dib markii ay suuqa kala amarka sare waxay kor u furmo, waa in aad isticmaasho DOS amray sida CD iyo DIR in ay helaan buuga meesha file aad rabto in aad tirtirto lagu meeleeyo iyo si loo hubiyo jiritaanka faylka siday u kala horreeyaan.
4. In uu furmo suuqa amarka, ku qor / DEL Famarka iyo saxaafadda gala in uu ku qasbo tirtirto file waa in la isticmaalo.
Fiiro gaar ah: In amarka kor ku xusan,waa in la bedelay magaca faylka la socdaan ay kordhin in aad rabto in aad tirtirto. Tusaale ahaan: del / f TestFile.txt .
WARNING !! - file A tirtiray isticmaalaya DEL amarka ma aha in uu ku biiro Recycle Bin laakiin waxay tirtirtaa si joogto ah. Isticmaal DEL amarka si taxadir leh.
5. Marka file la tirtiray, waxaad la xiro karo Command degdeg ah adigoo gujinaya ah Close button ka dhinaca kore ee midig ee suuqa ama khaanada EXIT furmo amarka iyo iminka gala .
Isticmaalidda dhinac saddexaad Tool - Unlocker
Inkasta oo aad u isticmaali kartaa mid ka mid ah laba hab oo kor lagu sharaxay in ay ka saarto file a in uu yahay in la isticmaalo, qalab dhinac saddexaad sida Unlocker dhigaya hawl aad u fudud. Qaybta ugu fiican yahay, Unlocker waa freeware ah oo gabi ahaanba waa bilaash ah si ay u soo bixi oo isticmaal. Tani waa sida Unlocker ka shaqeeya:
Fiiro gaar ah: A Windows 7 computer waxa loo isticmaalaa tixraaca.
1. Log on in aad PC Windows.
2. In la hubiyo in ay ku xiran yihiin Internet-ka.
3. Fur browser web oo aad doorato wax oo furo search engine doorbidayso. (Google, Yahoo !, Bing, iwm)
4. Isticmaalka engine raadinta, raadiyo Unlocker.
5. Marka laga helay, download Unlocker ee file installable iyo rakibi barnaamijka iyadoo la isticmaalayo habka loo xirxiro caadiga ah, ama aad hesho ay version qaadi karo.
Fiiro gaar ah: Unlocker la geliyo tixraaca this PC .
6. Taas ka dib, ay helaan faylka in aad rabto in aad tirtirto, laakiin waa in la isticmaalo.
7. Xaq-riix faylka.
8. Ka menu macnaha guud oo la soo bandhigay, guji Unlocker .
9. On the Control Account User sanduuqa xaqiijin, guji Haa in aad bixiso ogolaashahaaga si ay u sii bilaabay barnaamijka.
10. On interface soo bandhigay, liiska la heli karo files in la isticmaalo, guji in ay doortaan mid ka mid ah in aad rabto in lagu furo.
11. Laga hoose ee interface ka, guji Unlock in lagu furo file halka tagay codsi u dhigma furan. Haddii kale sidoo kale waxaad riixi kartaa Dila Hab- button in uu ku qasbo joojiso habka orodka in uu yahay masuul ka qaybgelaan file ka.
12. Marka file waxaa quful, waxaad xaq u-riixi kartaa file ah oo guji Delete ka menu macnaha guud.
13. Click Haa ku tirtirto File sanduuqa xaqiijin marka / haddii bandhigay.
Sida loo soo celiya File Haddii Waxaa la kac ahayn masaxay
Xitaa haddii file ayaa si xoog ah quful la isticmaalayo mid ka mid ah hababka, waxaa u dhaqaaqay Recycle Bin markii tirtiray (marka laga reebo marka tirtiray isticmaalaya line amarka). Taasi lagu sheegay, soo celinta file ka Recycle Bin waa mid fudud. Tani waa waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
1. desktop screen Windows, double-riix Recycle Bin ee icon.
2. Marka gudaha Bin Recycle , xaq-riix file in aad rabto in la soo celiyo.
3. Laga bilaabo menu macnaha guud, guji soo celi .
Fiiro gaar ah: Haddii file ah oo si joogto ah la tirtiray (tusaale ahaan marka la amarka DEL saaro), waxaad u baahan tahay oo ah software kabashada file ku ool ah sida Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado file ka dib.
In kasta oo ay tricks kor ku xusan shaqeyn dhow waqti kasta, waa in aad is ogow darafkeeda halka tirka file ah oo ku jira isticmaalka. Takhalusid file a qaldan keeni karaan cawaaqib sida nidaamka joogto ah ama ku meel gaar ah failure ama khasaaraha xogta. Si looga hor, ciidamada ka hor la tirtiro faylasha aad, hubi in aad si fiican u xaqiijin soo socda:
• file ee isticmaalka kuma jiraan xog muhiim ah.
• Force ka bixida nidaamka in lagu furo file ma keeno wax kasta oo waxyeello joogto ah si ay barnaamij u dhigma.
• Waxaad xoojiyaa file ka hor la tirtiro.
• Waxaad isku dayday (oo ku guuldareystay) siyaabo kale inay sameeyaan waxa aad doonayso in aad qabato, iyo xoog in la tirtiro file waa bidix doorasho kaliya.
> Resource > Ladnaansho > 3 hanad Siyaabaha Delete File ah ee isticmaal in Windows